Rohy fampidinana IOS 9.0.1 ho an'ny fitaovana rehetra | Vaovao IPhone
Apple dia vao avy namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny iOS 9. Na dia ny fametrahana amin'ny alàlan'ny OTA aza no mora indrindra sy haingana indrindra, satria ny fisie "vaovao" fotsiny dia ampidininao amin'ny fanavaozana, matetika dia mety ilaina ny manana ny kinova feno amin'ity fanavaozana ity. . Izany no antony anoloranay anao ny rohy fampidinana mivantana an'ny iOS 9.0.1 ho an'ny fitaovana rehetra mifanentana (iPhone, iPad ary iPod Touch).
iPod touch (taranaka faha-6)
Raha te hanavao ity kinova vaovao ity dia mila mampifandray ny iPhone amin'ny iTunes ianao, ary raha vao sintonina ireo rakitra mifanaraka amin'ny fitaovanao. safidio ny safidy "Refresh" raha tsindrio ny bokotra "Alt" raha mampiasa Mac OS X ianao, na ny "Shift" raha mampiasa Windows ianao. Ity fomba ity dia hamela ny iPhone na iPad anao tahaka ny taloha, miaraka amin'ny atiny feno, fa miaraka amin'ny kinova farany an'ny iOS napetraka.
Inona no vaovao amin'ity fanavaozana ity amin'ny ankapobeny dia misy ny fanitsiana ireo lesoka hita taorian'ny famoahana ny iOS 9 vao herinandro lasa izay. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika fa misy fanatsarana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Rohy fampidinana IOS 9.0.1 ho an'ny fitaovana rehetra
hatramin'ny nisintomako ny IOS dia notaritariko ho any iTunes fotsiny ilay fonosana niaraka tamin'ny iPhone nifandray tamiko ????
Tsy mila misintona na inona na inona ianao, araho ny torolalana amin'ny faran'ny lahatsoratra
Apple dia namoaka ny iOS 9.1 beta 2 ho an'ny mpamorona